အန ၁၁. ၁၁: ပဌမ မဟာနာမသုတ်
၁၁။ အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သက္ကတိုင်း ကပ္ပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ”သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးမှု ပြီးဆုံး၍ သုံးလလွန်မြောက်လျှင် မြတ်စွာဘုရား သည် ဒေသစာရီကြွချီတော်မူလိမ့်မည်”ဟု ရဟန်းများစွာတို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးခြင်း ကိစ္စကို ပြုကုန်၏။ ”သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးမှု ပြီးဆုံး၍ သုံးလလွန်မြောက်လျှင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူလိမ့်မည်ဟု ရဟန်းများစွာတို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးခြင်းကိစ္စကို ပြုကုန်၏”ဟု သာကီဝင်မဟာနာမ်မင်းသည် ကြားသိသည်သာတည်း။
ထိုအခါ သာကီဝင်မဟာနာမ်မင်းသည် မြတ်စွာဘုရားအထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခုသောနေရာ၌ ထိုင်နေလျက် မြတ်စွာဘုရားအား-”အသျှင်ဘုရား သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးမှု ပြီးဆုံး၍ သုံးလလွန်မြောက်လျှင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူလိမ့်မည်ဟု ရဟန်း များစွာတို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးခြင်းကိစ္စကို ပြုကြကုန်၏ဟု ဤစကားကို အကျွန်ုပ် ကြားရပါ၏။ အသျှင်ဘုရား အထူးထူးသော နေခြင်းတို့ဖြင့် နေကြရသော ထိုအကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ် နေခြင်းဖြင့် နေကြရပါမည်နည်း”ဟု လျှောက်၏။
မဟာနာမ် ကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ၊ သင်တို့သည် ငါဘုရားသို့ ချဉ်းကပ်၍ ”အထူးထူးသော နေခြင်းတို့ဖြင့် နေကြရသော ထိုအကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်နေခြင်းဖြင့် နေကြရပါမည်နည်း”ဟု မေး လျှောက်သော စကားသည် အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ကြသော သင်တို့အား လျှောက်ပတ်သည်သာတည်း။
မဟာနာမ် ယုံကြည်မှုရှိသူသည် (မဂ်ဖိုလ်ကို) ပြီးစေနိုင်၏၊ ယုံကြည်မှုမရှိသူသည် မပြီးစေနိုင်။ ထက်သန်သောလုံ့လရှိသူသည် (မဂ်ဖိုလ်ကို) ပြီးစေနိုင်၏၊ ပျင်းရိသူသည် မပြီးစေနိုင်။ ထင်သော သတိရှိသူသည် (မဂ်ဖိုလ်ကို) ပြီးစေနိုင်၏၊ သတိမေ့လျော့ သူသည် မပြီးစေနိုင်။ တည်ကြည်သူသည် (မဂ်ဖိုလ်) ကို ပြီးစေနိုင်၏။ မတည်ကြည်သူသည် မပြီးစေနိုင်။ ပညာရှိသူသည် (မဂ်ဖိုလ်ကို) ပြီးစေနိုင်၏၊ ပညာမရှိသူသည် မပြီးစေနိုင်။
မဟာနာမ် ဤတရားငါးမျိုးတို့၌ တည်၍ ထို့ထက်အလွန် တရား ခြောက်မျိုးတို့ကို ပွါးများလေလော့။
မဟာနာမ် ဤအရိယာတပည့်ကို (ရာဂ,ဒေါသ,မောဟတိုဖြင့်) မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ နေ၏ဟု ဆိုအပ်၏၊ ကြောင့်ကြမှုရှိသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ကြောင့်ကြမရှိဘဲ နေ၏ဟု ဆိုအပ်၏၊ တရားအလျဉ်သို့ ရောက်၍ မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တော်အောက်မေ့မှု ‘ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ’ကို ပွါးများ၏ဟု ဆိုအပ်၏။
မဟာနာမ် အရိယာတပည့်အား တရားတော်ကို အောက်မေ့သောအခါ၌ ရာဂလွှမ်းမိုးသောစိတ်သည် မဖြစ်၊ ဒေါသလွှမ်းမိုးသောစိတ်သည် မဖြစ်၊ မောဟလွှမ်းမိုးသောစိတ်သည် မဖြစ်၊ ထိုအခါ ထိုသူအား တရားတော်ကို အာရုံပြု၍ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သာ ဖြစ်၏။ မဟာနာမ် ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် အနက်ကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ ပါဠိကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ တရားနှင့် စပ်သော ဝမ်းမြောက်မှုကို ရ၏၊ ဝမ်းမြောက်သူအား နှစ်သက်မှုဖြစ်၏၊ နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသူအား ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏၊ ကိုယ်ငြိမ်းအေးသူသည် ချမ်းသာကို ခံစားရ၏။ ချမ်းသာသူအား စိတ်သည် တည်ကြည်၏၊ မဟာနာမ် ဤအရိယာတပည့်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ နေ၏ဟု ဆိုအပ်၏၊ ကြောင့်ကြမှုရှိသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ကြောင့်ကြမရှိဘဲ နေ၏ဟု ဆိုအပ်၏၊ တရား အလျဉ်သို့ ရောက်၍ တရား၏ဂုဏ်တော် အောက်မေ့မှု ‘ဓမ္မာနုဿတိဘာဝနာ’ကို ပွါးများ၏ဟု ဆိုအပ်၏။
မဟာနာမ် အရိယာတပည့်အား သံဃာ့ဂုဏ်တော်ကို အောက်မေ့သော အခါ၌ ရာဂလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ဒေါသလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ မောဟလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ထိုအခါ ထိုသူအား သံဃာ့ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြု၍ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သာ ဖြစ်၏။ မဟာနာမ် ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် အနက်ကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ ပါဠိကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ တရားနှင့် စပ်သော ဝမ်းမြောက်မှုကို ရ၏၊ ဝမ်းမြောက်သူအား နှစ်သက်မှု ဖြစ်၏၊ နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသူအား ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏၊ ကိုယ်ငြိမ်းအေးသူသည် ချမ်းသာကို ခံစားရ၏၊ ချမ်းသာသူအား စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ မဟာနာမ် ဤအရိယာတပည့်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ နေ၏ဟု ဆိုအပ်၏၊ ကြောင့်ကြမှုရှိသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ကြောင့်ကြမရှိဘဲ နေ၏ဟု ဆိုအပ်၏၊ တရားအလျဉ်သို့ ရောက်၍ သံဃာ၏ ဂုဏ်တော်အောက်မေ့မှု ‘သံဃာနုဿတိ ဘာဝနာ’ကို့ပွါးများ၏ဟု ဆိုအပ်၏။
၄. မဟာနာမ် နောက်တစ်မျိုးကား သင်သည် မကျိုး မပေါက် မပြောက် မကျားကုန်သော၊ တဏှာကျွန် (အဖြစ်မှ) လွတ်မြောက်ကုန်သော၊ ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းအပ်ကုန်သော၊ အမှား မသုံးသပ်အပ်ကုန်သော၊ တည်ကြည်မှု ‘သမာဓိ’ကိုဖြစ်စေတတ်ကုန်သော မိမိ၏ သီလတို့ကို အဖန်ဖန် အောက်မေ့လေလော့။ မဟာနာမ် အရိယာတပည့်အား သီလကို အောက်မေ့သောအခါ၌ ရာဂလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ဒေါသလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ မောဟလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ထိုအခါ၌ ထိုသူအား သီလကို အာရုံပြု၍ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သာ ဖြစ်၏။ မဟာနာမ် ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် အနက်ကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ ပါဠိကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ တရားနှင့် စပ်သော ဝမ်းမြောက်မှုကို ရ၏၊ ဝမ်းမြောက်သူအား နှစ်သက်မှု ဖြစ်၏၊ နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသူအား ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏။ ကိုယ်ငြိမ်းအေးသူသည် ချမ်းသာကို ခံစားရ၏။ ချမ်းသာသူအား စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ မဟာနာမ် ဤအရိယာတပည့်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်း သို့ ရောက်၍ နေ၏၊ ကြောင့်ကြမှုရှိသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ကြောင့်ကြမရှိဘဲ နေ၏၊ တရားအလျဉ်သို့ ရောက်၍ သီလအောက်မေ့မှု ‘သီလာနုဿတိဘာဝနာ’ကို ပွါးများ၏ဟု ဆိုအပ်၏။
မဟာနာမ် အရိယာတပည့်အား စွန့်ကြဲမှုကို အောက်မေ့သောအခါ၌ ရာဂလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ဒေါသ လွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ မောဟလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ထိုအခါ၌ ထိုသူအား စွန့်ကြဲမှုကို အာရုံပြု၍ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သာ ဖြစ်၏။ မဟာနာမ် ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် အနက်ကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ ပါဠိကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ တရားနှင့် စပ်သော ဝမ်းမြောက်မှုကို ရ၏၊ ဝမ်းမြောက်သူအား နှစ်သက်မှုဖြစ်၏၊ နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသူအား ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏၊ ကိုယ်ငြိမ်းအေးသူသည် ချမ်းသာကို ခံစားရ၏၊ ချမ်းသာသူအား စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ မဟာနာမ် ဤအရိယာတပည့်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ နေ၏၊ ကြောင့်ကြမှုရှိသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ကြောင့်ကြမရှိဘဲ နေ၏၊ တရားအလျဉ်သို့ ရောက်၍ စွန့်ကြဲမှုကိုအောက်မေ့မှု ‘စာဂါနုဿတိဘာဝနာ’ကို ပွါးများ၏ဟု ဆိုအပ်၏။
မဟာနာမ် မိမိ၏လည်းကောင်း၊ ထိုနတ်တို့၏လည်းကောင်း သဒ္ဓါ သီလ သုတ စာဂ ပညာကို အဖန်ဖန် အောက်မေ့သောအခါ၌ အရိယာတပည့်အား ရာဂလွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ ဒေါသ လွှမ်းမိုးသော စိတ်သည် မဖြစ်၊ မောဟလွှမ်းမိုးသောစိတ်သည် မဖြစ်၊ ထိုအခါ၌ ထိုသူအား နတ်တို့ကို (သက်သေထား၍ မိမိ၏ သဒ္ဓါစသော ဂုဏ်ကို) အာရုံပြု၍ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သာ ဖြစ်၏။ မဟာနာမ် ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် အနက်ကို သိနားလည်မှု ရ၏။ ပါဠိကို သိနားလည်မှု ရ၏၊ တရားနှင့်စပ်သော ဝမ်းမြောက်မှုကို ရ၏၊ ဝမ်းမြောက်သူအား နှစ်သက်မှု ဖြစ်၏၊ နှစ်သက်စိတ် ရှိသူအား ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏၊ ကိုယ်ငြိမ်းအေးသူသည် ချမ်းသာကို ခံစားရ၏၊ ချမ်းသာသူအား စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ မဟာနာမ် ဤအရိယာတပည့်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ နေ၏။ ကြောင့်ကြမှုရှိသော သတ္တဝါအပေါင်း၌ ကြောင့်ကြမရှိဘဲ နေ၏၊ တရား အလျဉ်သို့ ရောက်၍ နတ်တို့ကို (သက်သေထားလျက် မိမိ၏ သဒ္ဓါစသော ဂုဏ်ကို) အဖန်ဖန် အောက်မေ့ခြင်း ‘ဒေဝတာနုဿတိဘာဝနာ’ကို ပွါးများ၏ဟု ဆိုအပ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။